Abuu Muslim iyo Sheykh Fu’aad Max’med Khalaf oo meel Fagaara ah ka sheegay in WFP ay tahay Cadaw kasoo horjeeda Jiritaanka Umadda Somaaliyeed (Warbixin). | Halganka Online
Abuu Muslim iyo Sheykh Fu’aad Max’med Khalaf oo meel Fagaara ah ka sheegay in WFP ay tahay Cadaw kasoo horjeeda Jiritaanka Umadda Somaaliyeed (Warbixin).
Posted on Maarso 27, 2010 by halganka
Saraakiil katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay khatar la sheegay in hay’adaha sheegto samafalka ku hayaan shacabka muslimiinta Soomaaliyeed.
Sheykh Muqtaar Abuu Muslim oo katirsan saraakiisha siyaasadda iyo dacwada xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa shalay Muxaadaro dheer ka jeediyay fagaare ku yaal degmada Huriwaa ayaa shacabkii dhagaysanayay u sheegay waxyaabo ka qarsoonaa dadka qaar.
Muxaadarada oo ciwaankeedu ahaa khatarta WFP ay leedahay ayuu Abuu Muslim ku faah faahiyay waxa ay dalka ka qabtaan Hay’adaha Q.Midoobe ee sheegto in ay sama falayaal yihiin.
Abuu Muslim oo Muxaadaradiisa u tiirinayay natijooyin ay soo saareen guddi baaris ah oo ay Islaamiyiintu sameeyeen in dhacdooyin xaqiiq ah oo Somaliya ka dhacay tan iyo wixii ka dambeeyay dowladii Siyaad Barre ayaa sheegay in caalamku uu Somalida kala dagaalamay jaanib walba.
Sheykhu wuxuu sheegay in WFP ay samaysay wax walba oo ay hoos ugu dhigi lahayd dhaqaalaha,diinta,jiritaanka Umadda Somaliyeed balse nasiib wanaag laga joojiyay khatartii ay waday oo aan weli ku tarmin bulshada dhaxdeeda.
Wuxuu tusaale usoo qaatay is dilka beelaha Somaliyeed oo uu sheegay in ay lug weyn ku lahayd WFP “hay’adaasi waxay hubka isugu dhiibi jirtay beelaha walaalaha ah kadibna way is dili jireen, waa xaqiiq ay mujaahidiintu ogaadeen, waxay ku dadaali jirtay in Somalidu aysan tuugsiga gaalada ka bixin”ayuu yiri Abuu Muslim.
Inkastoo aan qoraal lagusoo koobi karin hadane waxaa si kooban uga hadlay dhacdooyinka cuuryaaminta ah ee WFP Sheykh Fu’aad Muxamed Khalaf oo isna muxaadaro ka jeedinayay Markazka Salaaxudiin degmada Huriwaa.
Sheykh Fu’aad wuxuu sheegay in WFP ay mas’uul ka ahayd fatahaadaha webiyada kadib markii ay bacaad ku shubtay Kanaalada waaweyn ee Webiyada Shabelle iyo Jubba biyaha banaanka uga saaro si aysan beeralaydu wax utacban.
Dhacdadii layaabka lahayd ee uu sheykh Fu’aad sheegay ayaa ahey in WFP ay Gobalka Sh/Hoose gaysay cayayaan dilaa ah oo ay kasoo qaaday dalka Baraziil.
“Hay’adda WFP waxay samaysay wax walba oo cuuryaamin kara bulshada si ay muslimiintu u kaalmaystaan gaalada, waxaan aad ula yaabnay markii aan booqanay deegaank 75 kM ujira Baraawe oo dadkii aan Zakada kasoo qaadaynay noo sheegeen in hay’aduhu ay dalka soo geliyeen Tisxi dilaa ah”.
Sheykh Fu’aad wuxuu cadeeyay Tisxi nuuca Galdiga ah oo xoolaha Lo’da qaniina ay WFP ka keentay webiga Amazon Barazil islamarkaana ay iyagoo sanduuq ku jira kusii daysay gobalka Sh/Hoose kadibna khsaara xoogana uu kasoo gaaray dadka xoola dhaqatada ah balse markii xoolaha Zakada laga bixiyay uu baaba’ay cudurkaasi dibadda lagasoo dhoofiyay.
Shacabkii Muxaadarada dhagaysanayay ayaa latacubay xaasidnimada iyo xaqdiga ay hay’adaha UN-ka u qabaan shacabka, sidoo culimadii muxaadaraynaysay waxay sheegeen in UNDP,Word Fusion ay iyana yihiin cadaw looso diray sidii ay dhibaatadu ugasii jiri lahayd Somaliya.
« Murtadkii degmada Xamar jajab oo ku Bakhtiye qarax lala beegsaday iyo Afhayeenkii Mooryaanta booliiska dowlada ridada ah oo dhaawac ah Wasiir katirsan Xukuumada Ridada ah oo Xalay ka Badbaaday fal lagu khaarijin lahaa (Faah Faahin). »